Khuluma nefektri esezingeni lomhlaba iManitowoc futhi nikhulume ngekusasa ndawonye!
Ekuseni ngoSepthemba 3, uMnu Lei Wang, Iphini Likamongameli Ophakeme Wezimakethe Eziqhamukayo zeManitowoc Tower Machinery Business and President of China Region, kanye neqembu lakhe bamenywa ukuba bavakashele uGrace. La maqembu womabili abe nokushintshana okujulile nokunomdlandla ekukhiqizeni okuncikile ku-manufacturi ethuthukisiwe ...
Ubuchwepheshe obusha, amaPlastikhi alolonga ikusasa!
Ngo-3th Septhemba, 2020, unjiniyela omkhulu uMnu uPETER FRANZ waseJalimane wajoyina ngokusemthethweni uGrace Machinery. Ngolwazi lwama-37 weminyaka ku-R & D technology extrusion technology kanye nokuphathwa komklamo, uMnu. UPeter FRANZ usebenze e-R & D nomphathi wezentengiso wase-DROSSBACH (Germany), njengomphathi jikelele weBatten ...
1600mm PE Pipe extrusion Umugqa
Muva nje, ulayini wokukhiqizwa kwepayipi we-1600mmPE uqalwe ngempumelelo efektri yekhasimende futhi wagijima ngokuqinile. Ikhasimende likhulume kakhulu ngokusebenza ngobungcweti konjiniyela bakaGrace! Eminyakeni eminingi yokuhlangenwe nakho okusebenzayo, uGrace usethuthukile futhi ...
Umugqa we-GRACE 630mm & 1200mm PE Pipe Extrusion Lines uvunyelwe ngempumelelo yiNkampani Yombuso Yezimboni Zokwakha (SCCI) / Ministry of Industry Minerals of Iraq
Halala! I-GRACE 630mm & 1200mm PE Pipe Extrusion Lines ivunyelwe ngempumelelo yiNkampani Yombuso Yezokwakhiwa Kwezimboni (SCCI) / Ministry of Industry Minerals of Iraq! Lokhu kungumsebenzi omkhulu woMnyango Wezimboni wase-Iraq. UMnu Manhal Aziz Al Khabaz, uNgqongqoshe woMnyango ...
Umugqa we-1200mm PE Pipe Extrusion Line
Umugqa wamakhasimende aphesheya kwezilwandle owenziwe ngokwezifiso we-630-1200mm HDPE wepayipi wokukhiqiza i-extrusion usebenze ngempumelelo ku-GRACE workshop! I-Extruder: yamukela amandla okulawula imitha yamandla adonsela phansi, isikulufa sokusebenza kahle kanye nomgqomo, ibhokisi lokungenisa elinomthwalo ophezulu we-Siemens; Umshini wokulinganisa umshini: usebenzisa ipuleti inayiloni, ...
Siyakuhalalisela ngokuBambisana kwamasu weGRACE ne-OPW
Zonke izinhlangano ziyavuma ukunikela ekubambisaneni okujulile emkhakheni wepulasitiki we-extrusion, ikakhulukazi ekuthuthukiseni ngokuhlanganyela komshini okhethekile. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-GRACE isibe ukuphela kwe-Chinese plastic extrusion machine co pa ...
Umugqa we-315-800mm HDPE Pipe Extrusion
Ngemuva nje koMkhosi Wentwasahlobo waseChina, ithimba lonjiniyela lokulungisa amaphutha likaGrace belibambe iqhaza ngokuphelele ekulungiseni amaphutha. Muva nje, unjiniyela wokulungisa amaphutha uMnu uWang Lei uye e-Iran ngenhloso yokulungisa amaphutha futhi wazinza ngokuhambisa ulayini wokukhiqiza wepayipi o-3 izingqimba ze-OD800mm. Ikhasimende highl ...
Izivumelwano Zokusebenzisana Zomshini ezisayiniwe ze-GRACE namaRadius Systems
Muva nje, uGrace usayine isivumelwano sokusebenzisana namasu eRadius Systems. Ukubambisana kwamasu kufinyelelwe ngenhloso yokuthuthukisa ukubambisana okujulile emkhakheni wokusebenzisa kabusha ipulasitiki, ngobuchwepheshe obusha obuqhubekayo obukhulisa intuthuko yale mboni. Njengomkhiqizi ...
Ukubambisana Kwamasu ne-OPW
Zonke izinhlangano ziyavuma ukunikela ekubambisaneni okujulile emkhakheni wepulasitiki we-extrusion, ikakhulukazi ekuthuthukiseni ngokuhlanganyela komshini okhethekile. Kumele kuqashelwe ukuthi i-GRACE isibe ukuphela komlingani osebenzisana nomshini we-plastic extrusion umshini webhizinisi le-OPW. Siyajabula ukuhlanganyela nawe ukuthi iG ...